Maherifon’ny tantara antsary Indoneziana iray miady ho amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiteny baliney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2020 3:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Italiano, 繁體中文, Português, English
Luh Ayu Manik Mas. Niaviany: Facebook.
Luh Ayu Manik dia tantara an-tsarin-jazavavy dingana faha-8 avy any Bali, Indonezia izay niofo ho Luh Ayu Manik Mas, maherifo iray mampiasa ny angovony hiarovana ny tontolo iainana. Volamena ny dikan'ny Mas amin'ny fiteny Baliney.
Izy no maherifo tanora mpiaro ny tontolo iainana voalohany indrindra ao Indonezia, ary novolavolain'ny artista ho ao anatin'ny tetikasam-panentanana ara-tontolo iainana sy fanentanana ny fiteny Baliney. Tombanana ho roa tapitrisa ny olona mpiteny Baliney ao Indonezia izay manana mponina miisa 261 tapitrisa. Noho ny fitsipika napetraky ny governemanta, atsasakadiny isan'andro ihany no azo aely ireo fandaharana fahitalavitra amin'ny fiteny Baliney, ary ora roa na latsak'izany isa-kerinandro kosa ny fetran'ny fampianarana amin'ny fiteny Baliney. Raha nokendrena hampisonga ny fampiasana ny Indoneziana ho tenim-pirenena izany, dia manasarotra ihany koa ny fampiroboroboana sy ny fampivelarana ireo tenim-paritra tahaka ny Baliney.
Ny tena mahaliana ity anaran-tantara an-tsary ity dia ny fandraisan'ny maro anjara ny anjoriany (aventures) amin'ny alalan'ny media sosialy tahaka ny Facebook, Instagram ary Twitter. Midika izany hoe afa-manolotra lohahevitra sy tantara ho azo ampidirina ao anatin'ny tantara an-tsary rafetin'ny mpanoratra sy ny artista miasa ao amin'ny tetikasa Luh Ayu Manik Mas ny mpisera aterineto, indrindra fa ny mpianatra.
Ny BASAbali Wiki, sehatra nomerika mampiroborobo ny fiteny Baliney, no nanomboka ny tetikasa. BASAbali Wiki Director of Communications Nizara antsipirihany bebe kokoa momba ny tetikasa tamin'ny alalan'ny antsafa imailaka nifanaovana tamin'ny mpanoratra i Ni Nyoman Clara, talen'ny fifandraisana ao amin'ny BASAbali Wiki :
Niainga avy amin'ireo vehivavin'i Bali izay matanjaka, mafy ary kiriana tahaka ireo maherifo hafa no nananganana ilay maherifo Luh Ayu Manik. Liseana 14 taona i Luh Ayu Manik ary miofo ho maherifo rehefa miatrika olana ara-tontolo iainana na zavatra hafa. Ny tanjon'i Luh Ayu Manik Mas dia ny hampahaliana ny olona amin'ny fampiasana sy fanomezan-danja ny fiteny Baliney sy fitenim-paritra hafa miaraka amin'ny fitenim-pirenena sy iraisampirenena.
Tao amin'ny tantara iray i Luh Ayu Manik Mas sy ireo namany miady amin'ireo mpanapaka hazo tsy ara-dalàna ary tantara iray hafa indray miatrika ny fandotoan'ny plastika. Ao amin'ireo tantara roa ireo i Luh Ayu Manik miofo ho Luh Ayu Manik Mas izay miady amin'ireo mpandoto fariparitana ho toy ny bibilozabe. Manolotra dika amin'ny teny anglisy sy indoneziana ny webtoon.
Ao anatin'ny fampiroboroboana ny tantara an-tsary dizitaly (nomerika), nampiatranoan'i Luh Ayu Manik Mas nandritra ny herinandro tamin'ny volana oktobra 2019 ny kaonty Twitter fikatrohana nomerika ho amin'ny fiteny aziatika.
Salama ! Izaho no Luh Ayu Manik Mak, maherifon'i Bali !
Antsoin'ny namako hoe Iluh aho 😁
Zohio ny anjoriako mahafinaritra amin'ny fanarahana ny kaonty twitter @LuhAyuManikMas1 😁👇
Tantarain'ilay zazavavy ny nihaonan-dry zareo tamin'ireo mpanapaka hazo tsy ara-dalàna tao an'ala.
Handeha hamboly zanakazo maro any an'ala i Iluh sy ny namany. Nisy magnolias (champaca), hazo banyans, sns amin'izany. Nitondra lapelina sy angadim-bazaha izahay. Hiaraka aminay hamboly ireo ve ianao ?😁🌱
Nankasitrahan'ny vondrom-piarahamonina Baliney tokoa ilay tetikasa. Nozarain'i BASAbali Wiki ihany koa fa efa tafiditra any an-tsekoly ny (tantara an-tsary) Luh Ayu Manik Mas :
Nientanentana momba an'i Luh Ayu Manik Mas tokoa ny olona. Efa maro ireo andian-tantara ao aminy no ampiasain'ireo mpampianatra baliney hampianarana ny fahaiza-manoratra sy talenta hafa. Hotohizanay ny fanatrarana ny olona amin'ny alalan'ny atrikasa eny an-kianja sy ao amin'ny media sosialy mba hampakarana ny lanjan'ny fiteny ao an-toerana.